Ndị njem nde 26 gara site na ọdụ ụgbọ elu Finavia na 2019
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ndi akuko » Ndị njem nde 26 gara site na ọdụ ụgbọ elu Finavia na 2019
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Finland na -agbasa ozi ọma • News • Ndi akuko • Technology • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
2019 bụ afọ na-arụsi ọrụ ike na ọdụ ụgbọ elu Finavia n'agbanyeghị na uto nke ụgbọ elu na-agafe agafe karịa afọ ndị gara aga. Ngụkọta nke ndị njem 26 (+ 4,2%) gara njem na ụgbọ elu ndị a haziri ahazi.
N'afọ gara aga, ndị njem njem 21,9 (+ 4,9%) gafere Airportgbọ elu Helsinki, bụ ọdụ ụgbọ elu mba ụwa kasị ukwuu na Finland. Ọnụ ọgụgụ ndị njem jiri ọdụ ụgbọ elu ndị ọzọ nke Finavia mụbara ruo ngụkọta nke nde 4,2 (+ 0,6%). N’ime ọdụ ụgbọelu ndị ka ibu, ọnụ ọgụgụ ndị njem rịrị elu na ọdụ ụgbọ elu Turku (+22,6%), Helsinki Airport (+ 4,9%) na ọdụ ụgbọ elu Rovaniemi (+2,6%). Ọnụ ọgụgụ nke ndị njem 1,5 (+ 1,5%) jiri ọdụ ụgbọ elu Finavia na Lapland na 2019. Ọnụ ọgụgụ ndị njem gbadara ntakịrị na Oulu Airport (-3,6%) na Tampere Airport (-2,5%) n'ihi iji belata ọnụ ọgụgụ ma ọ bụ ụgbọ elu.
Ọnụ ọgụgụ ndị na-ebufe ndị njem na-eto na ọdụ ụgbọ elu Helsinki
Ọnụ ọgụgụ nke ndị njem na-ebufe site na otu ụgbọ elu mba ọzọ na ọdụ ụgbọ elu Helsinki mụbara site na 16,7 pasent. Fgbọ elu si Japan, Germany, China na Sweden nwere ndị njem njem mba ofesi. N'afọ gara aga, ndị njem na-ebufe mba ofesi ruru 38,6 pasent nke ndị njem niile na-agafe Ọdụ ụgbọ elu Helsinki.
Ọnụ ọgụgụ nke ndị njem 659 000 (+ 18,2%) gara njem na njem na China na 2019. Maka ụzọ ndị Japan, ọnụ ọgụgụ ndị njem ahụ bụ 837 000 (+ 11,2%). Ka ọ dị ugbu a, a na-arụ ụgbọ elu site na ọdụ ụgbọ elu Helsinki gaa ebe itoolu na China. Ọdụ ụgbọ elu Helsinki na-enyekwa ụgbọ elu na-aga ebe ise na Japan, nke karịrị karịa ọdụ ụgbọ elu ọ bụla nke Europe. Na mgbakwunye, ụgbọ elu atọ kwa izu bidoro rụọ ọrụ na ọdụ ụgbọ elu Daxing International nke Beijing n'oge mgbụsị akwụkwọ ikpeazụ. N’ọnwa Disemba, Ọdụ ụgbọ elu Helsinki mepere naanị njikọ Europe na Sapporo, Japan.
Ndị njem 1 644 000 (-1,6%) na-aga n'okporo ụzọ Sweden, ndị njem 594 000 (+ 15,2%) na-aga n'okporo ụzọ Russia na ndị njem 323 000 (+ 9,4%) na-aga n'okporo ụzọ Estonia gafere Ọdụ ụgbọ elu Helsinki na 2019.
”Ọdụ ụgbọ elu Helsinki ka na-eme nke ọma ịdọta ndị njem. Ndị njem na-ebufe Asia na-etolite otu ndị ọrụ dị mkpa na ọdụ ụgbọ elu Helsinki dị ka ọnọdụ obodo Finland dị n'etiti Asia na Europe dị mma maka ịnyefe. N'ime oge ọkọchị 2020, ụgbọ elu 53 kwa izu na China na ụgbọ elu 45 kwa izu na Japan ga-arụ ọrụ site na ọdụ ụgbọ elu Helsinki. The ezigbo njem na elu àgwà nke ndị ahịa na-enye anyị a asọmpi uru. Ọmụmaatụ, ọtụtụ ọrụ dị na Chinese ma n'ọdụ ụgbọ elu na na anyị digital gburugburu, "na-ekwu, Petri Vuori, FinaviaOnye osote onye isi ala, Ahịa na mmepe.
Ihe dị ka ndị njem 439 000 si North Helsinki gaa North America na 2019, nke bụ ihe dịka ndị njem 103 000 karịa na 2018 (+30,5%). Ọnụ ọgụgụ ụgbọ elu ndị enyere site na Helsinki Airport ruo North America abawanyewo ma e jiri ya tụnyere afọ gara aga - dịka ọmụmaatụ, n'ihi ụzọ ọhụrụ na-aga Los Angeles nke mepere na Machị.
Rozọ ọhụụ si ọdụ ụgbọelu netwọkụ anyị - Lapland ka bụ ebe mara ezigbo mma
Dị ka afọ gara aga, ụzọ ndị gara Germany, Sweden na Spain bụ ndị kachasị ewu ewu mgbe a na-atụle ọdụ ụgbọ elu Finavia niile. Maka ọdụ ụgbọelu netwọkụ anyị, ọnụọgụ ndị njem mba dị elu dị elu karịa n'ụzọ ndị esi aga Sweden. N’ọdụ ụgbọ elu Helsinki, ụzọ ndị a ga-esi na Germany bụ ndị kachasị ewu ewu.
Ọdụ ụgbọ elu Turku gara n'ihu na mmepe ya dị mma ka ọnụọgụ ndị njem rịrị elu ruo 453 000 (+ 22,6%). N’ọdụ ụgbọ elu Turku, ụgbọ elu na-aga Gdansk, Poland, nwere ọnụ ọgụgụ ndị njem kachasị elu na 2019. Nhọrọ nke ọdụ ụgbọ elu Turku Airport nke ụzọ ndị gara kpọmkwem na Europe gafere nke ukwuu n’afọ gara aga. N'oge ọkọchị 2020, ụgbọ elu na-aga Kutaisi, Georgia, ga-amalite ịrụ ọrụ site na ọdụ ụgbọ elu Turku.
N’ọnwa Disemba, Ọdụ ụgbọ elu Oulu ruru nde ndị njem otu nde kwa afọ nke ugboro anọ n’akụkọ ihe mere eme ya. Na ngụkọta, ndị njem nde 1,1 gafere Oulu Airport na 2019, nke dị obere karịa na 2018 (-3,6%).
Ndị njem 661 000 (+2,6%) ji ụgbọ elu Rovaniemi mee ihe n'afọ gara aga. N’ọdụ ụgbọ elu, ụzọ mba ụwa na ọtụtụ ndị njem bụ ụzọ si Rovaniemi na-aga London. N'ime oge oyi nke oge a, ọdụ ụgbọ elu Rovaniemi na-enyekwa ụgbọ elu na Manchester. Zọ kachasị dị mkpa nke mepere n'oge oge oyi bụ mmalite nke ụgbọ elu si Rovaniemi gaa Istanbul maka oge oyi na Disemba.
North ka mara mma nke ukwuu - ngụkọta nke ndị njem 1,5 nde (+1,5%) jiri ọdụ ụgbọ elu Finavia na Lapland na 2019. Ọnụ ọgụgụ ndị njem na-agagharị na ụgbọ elu ụgbọ elu bụ 309 000 (-8,0%), na 1 374 kwụrụ ụgwọ ụgbọ elu (-6,3%) bịarutere ọdụ ụgbọelu Finavia na Lapland. Odida nke afọ gara aga enweghị ego nke Thomas Cook na nhazi ọkwa nke ụfọdụ ụgbọ elu ahụ dị ka ụgbọ elu emebere. Onu ogugu kacha elu nke ugbo elu ndi akwuru ugwo na Lapland si United Kingdom, ebe Kittilä, Rovaniemi na Ivalo bu ebe ndi kacha ewu ewu.
Mmemme mmepe Finavia maka ọdụ ụgbọ elu Lapland iji melite ahụmịhe ndị ahịa na bulie ọkwa ọrụ ka emechara dị ka atụmatụ karịa mbido oge ekeresimesi nke 2019. Mmemme mmepe ahụ gụnyere itinye ego dị nde euro 55 maka iji meziwanye ahụmịhe ndị ahịa ma bulie ọkwa ọrụ na ọdụ ụgbọ elu Ivalo, Kittilä na Rovaniemi.
Ọrụ sara mbara maka ọrụ maka ndị njem na ọdụ ụgbọelu
“2019 bụ afọ nke na-etolite etolite na ezigbo afọ n’ozuzu: ikuku ụgbọ elu ka na-abawanye na ọnụọgụ dị elu karịa ogologo oge. N’ọdụ ụgbọ elu Helsinki, anyị mepere Aukio, nke bụ obi ọhụrụ nke mpaghara ndị na-abụghị Schengen, yana ọhụụ ọhụrụ nke West Pier na-efe ndị njem na ụgbọ elu ogologo oge na ụgbọ elu buru ibu.
Finavia na-arụ ọrụ n’esepụghị aka iji nye ndị njem njem klas mbụ. Na Lapland, anyị nwere ike imeghe ndọtị nke ọdụ ụgbọelu Rovaniemi na Kittilä nye ndị ahịa tupu mmalite nke oge Krismas kacha ekwo ekwo.
Okwesiri ighota na uto na mmepe anyi ka emezuru. Anyị bụ ndị ọsụ ụzọ na mmepe nke ịrụ ọrụ ọdụ ụgbọ elu na-adigide karị - ọdụ ụgbọ elu 21 niile nke Finavia adịlarị anọpụ na carbon,
Finavia chọrọ ime Helsinki Airport ka ọ bụrụ ọdụ ụgbọ elu kacha mma n'ụwa maka ọrụ na ikuku nke ọdụ ụgbọ elu. 2020 ga-abụ oge ọrụ owuwu ihe na Helsinki Airport. A ga-emepe ogige ụgbọala ọhụrụ P1 / P2, nke fọrọ nke nta ka ọ dị n'ogologo ya site n'oge mgbụsị akwụkwọ 2020. Ewu nke ọnụ ụzọ ọhụrụ nke ọdụ ụgbọ elu na ụlọ mbata na mbata amalitela dị ka atụmatụ. A ga-agbatị ọtụtụ ọrụ ndị a na-enye na ọdụ ụgbọ elu ka ụlọ ahịa na ụlọ nri ọhụrụ mepere na mpaghara ọnụ ụzọ n'oge opupu ihe ubi.